Do You Tip Car Service – Answered!
घर / कार सेवा, उत्तर अमेरिका, क्षेत्र, यातायात, संयुक्त राज्य अमेरिका / तपाइँ टिप कार सेवा गर्नुहुन्छ
तपाइँ टिप कार सेवा गर्नुहुन्छ
1 कार सेवा टिपिंग शिष्टाचार
1.1 संयुक्त राज्य अमेरिकामा तपाईंको कार सेवा वा लिमो ड्राइभर टिपिंग
1.2 के तपाई टिप कार सेवा गर्नुहुन्छ?
1.3 कार सेवा कसरी टिप गर्ने
1.4 के तपाई प्रिपेड कार सेवा टिप गर्नुहुन्छ?
1.5 एयरपोर्टमा किन कार सेवा प्रयोग गर्ने?
कार सेवा टिपिंग शिष्टाचार
संयुक्त राज्य अमेरिकामा तपाईंको कार सेवा वा लिमो ड्राइभर टिपिंग
कार सेवाको मतलब बिभिन्न व्यक्तिलाई बिभिन्न चीज हुन सक्दछ तर यो एक यातायात वाहनमा अगाडि बुक गरिएको छ। तपाई कि त अगाडि कल गर्नुहोस् वा कार बुकिंग गर्न अनलाइन हेर्नुहोस् जहाँ तपाईंलाई जहाँ पुग्न आवश्यक पर्दछ। एक एयरपोर्ट सन्दर्भमा, कार सेवा सामान्यतया एक भेट र अभिवादन सेवा हो। त्यहाँ जहाँ ड्राईभरले तपाईंलाई एयरपोर्ट आगमनको क्षेत्रमा साइन इन गर्नेछ, तपाईंलाई गाडीमा आफ्नो सामान लिन मद्दत गर्दछ, र तपाईंलाई तपाईंको गन्तव्यमा लैजान्छ। कार सेवाहरू प्राय तेस्रो पक्षहरू द्वारा बुक गरिएको हुन्छ, कारमा सवार व्यक्तिको सट्टामा, र त्यसले चाखलाग्दो टिपिंग मुद्दा उत्पन्न गर्न सक्छ।
के तपाई टिप कार सेवा गर्नुहुन्छ?
तपाईको कार सेवा चालकले तपाईको सवारीको लागतको १०-१-10% सल्लाह दिनेछ। असाधारण सेवा, सामान मद्दत माथिको र पछाडि जानको लागि र आफ्नो ड्राइभरलाई अधिक टिप्स गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्, र यदि उनीहरूले तपाईंलाई लामो समयको लागि कुर्नुपर्‍यो भने। तपाईं कम टिप गर्न सक्नुहुन्छ, वा कुनै पनि होईन, खराब सेवा वा असुरक्षित ड्राइभिंगको लागि।
यदि कार सेवा तेस्रो पक्ष द्वारा बुक गरिएको थियो (तपाई हैनौं) तपाईले चालकलाई (वा बुक गर्ने व्यक्ति) सोध्न नहिचकिचाई यो टिप समावेश छ कि छैन भनेर। जब कार सेवा एक व्यक्ति को लागी एक व्यवसाय द्वारा बुक गरीन्छ, यो एक सामान्य टिप को लागी सामान्य छ व्यापार द्वारा छोडियो। यो सोध्नको लागि भुक्तान गर्दछ किनकि यसले तपाईंलाई केही पैसा बचत गर्नेछ र तपाईं डबल ट्रिपिंगबाट बच्नुहुनेछ।
कार सेवा कसरी टिप गर्ने
यो मानक छ कि तपाइँको ड्राइभर कार सेवा लागत को 10-15% को एक टिप छोड्न। यसको मतलब त्यो $ 50 सवारी को लागी, तपाइँ $5र 7.50 XNUMX को बीचमा टिप गर्नुपर्छ।
याद गर्नुहोस् कि तपाईंले ड्राइभरलाई कति टिप्स गर्नुभयो तपाईंले कसरी प्राप्त गरेको सेवामा आधारित हुनुपर्दछ। यदि सेवा उत्कृष्ट थियो भने, बढि टिप्स गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। यदि तपाईंसँग डरलाग्दो अनुभव छ भने, केही पनि नसक्ने सल्लाह दिंदै खराब नमान्नुहोस्।
के तपाई प्रिपेड कार सेवा टिप गर्नुहुन्छ?
तपाइँले तपाइँको प्रिपेड कार सेवा ड्राइभरलाई टिप दिन चाहानुहुन्छ कि पनी टिप प्रीपेड पनि छ कि छैन भनेर निर्भर गर्दछ। यदि टिप प्रीपेड गरिएको थिएन भने, तपाईंले चालकलाई सवारीको लागतको १०-१%% को टिप छोड्नु पर्छ। यदि कार सेवा टिप प्रीपेड थियो भने तपाईं टिपिंग हुकबाट टाढा हुनुहुन्छ र यसको चिन्ता लिनु पर्दैन।
यदि तपाईंलाई थाहा छैन कि यदि टिप प्रीपेड थियो कि हैन भने तपाईंले आफ्नो ड्राइभर वा तपाईंको लागि कार सेवा बुक गर्ने व्यक्तिलाई सोध्नु पर्छ। यो केहि अजीब हुन सक्छ तर यो साधारण समस्या हो र तिनीहरूले बुझ्दछन्।
एयरपोर्टमा किन कार सेवा प्रयोग गर्ने?
एयरपोर्टमा तपाईंलाई भेट्न कार सेवा बुकि ofको ठूलो फाइदा भनेको लामो ट्याक्सी लाइन बेवास्ता गर्नु हो। यो प्रायः ठूला शहरहरूमा हुन्छ जहाँ तपाईसँग एउटा भौतिक ट्याक्सी लाइन वा भर्चुअल एक Uber / Lyft लाईनको रूपमा हुन सक्छ। ट्याक्सी लाइनमा पर्खनुको सट्टा तपाईको कार सेवा चालकले तपाईलाई एयरपोर्ट आगमन क्षेत्रमा भेट्न पाउँछन् जसमा तपाईको नामको साथ एउटा चिन्ह रहेको हुन्छ। तपाईंको ड्राइभर त्यसपछि तपाईंलाई तपाईंको सामानको साथ मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई तपाईंको गन्तव्यमा ड्राइभ गर्दछ। यो एयरपोर्ट र तनाव तपाइँको एयरपोर्ट संग अपरिचित छैन भने समय बचाउन सक्छ। हामी सबै सहमत छौं कि कम तनावले अझ रमाइलो यात्राको लागि बनाउन सक्छ।
एक एयरपोर्टमा कार सेवाको अर्को फाइदा तपाईलाई भेट्न आउने जोसुकैले यस क्षेत्रसँग परिचित छैन उनको लागि सवारी पूर्व-बुक गर्न सक्षम भइरहेको छ। यो विशेष गरी स्वागत छ यदि व्यक्ति राज्य बाहिर वा विदेशमा छ भने।
विमानस्थलकार सेवाchauffeurलिमो सेवाlyftट्याक्सीटिपिङसुझावUberसंयुक्त राज्य अमेरिका कार सेवाउत्तर अमेरिकाक्षेत्रयातायातसंयुक्त राज्य अमेरिका
नाई टिप क्यालकुलेटर 1951
स्लोभाकियामा टिपिंग 1904
के तपाइँ टिप एएए गर्नुहुन्छ? 1732
D०० डलरमा कति डाइम्स छन्? 1715
टिपिंग टूर गाईड्स श्रीलंका 1710